Filoham-pirenena mivady : Nankahery ny vahoakan’i Toamasina -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloham-pirenena mivady : Nankahery ny vahoakan’i Toamasina
08/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niray fo tamin’ireo traboina. Vantany vao nivoaka ny tanànan’i Toamasina ny rivodoza AVA dia nidina avy hatrany tany an-toerana nijery ireo fahasimbana sy ny voina nahazo ny vahoakan’i Toamasina ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady niaraka tamin’ny Praiminisitra sy ny minisitra maromaro, ny sabotsy lasa teo. Ny tanànan’i Toamasina izay potika tanteraka 100 isan-jato noho ny fandalovan’ny AVA iny, isan’izany ny fahasimban’ny trano maro, sekoly sy biraom-panjakana, ary ny fahatapahan’ny andrin-jiro. Isan’ny potika tanteraka ihany koa ny lalam-pirenena RN2. Araka ny tatitra voaray dia 3 841 no isan’ny traboina, 6 naratra ary iray no namoy ny ainy tany an-toerana. Noho izany nisy ny fijerena maika an’i Toamasina sy ny fampaherezana ireo traboina, tamin’ny fitondrana fanampiana vonjy maika toa ny fanolorana vary 20 taonina, legioma 10 taonina, tafo fanitso miisa 3000, lay 200 isa, tranolay 10 mirefy 36 metatra toradroa, “tarpaulins” 20 isa, savony 20 baoritra ary lamba firakotra miisa 200. Fihetsika izay mampiseho fa miray fo, miray saina ary miray fanahy amin’ireo traboina ao anatin’ny fahasahiranana mahazo azy ireo ny Filoham-pirenena. Isan’ny lahara-pahamehana hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina “ny hamerenana ny jiro sy ny rano madio, ary ny fanarenana haingana indrindra ireo sekoly ahafahan’ireo ankizy miverina haingana indrindra an-dakilasy.” Nampitandrina ireo izay mikasa hanararaotra hampiakatra ny vidin’entana ihany koa ny Filoha Rajaonarimampianina Hery. Nanome baiko amin’ny hanarenana haingana iny lalam-pirenena RN2 iny ihany koa ny tenany. Efa fantatra fa efa mandeha ny asa amin’izao fotoana izao. Ankoatra ny tany Toamasina, nanampy ireo teto an-drenivohitra ihany koa ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady vantany vao nahare fa efa nisy sahady ireo traboina vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza AVA teto Antananarivo, toa ny eny Ankorondrano Andranomahery. Naniraka avy hatrany ny Tanora HVM Nasionaly sy ny Tanora Hvm Antananarivo Analamanga nijery ny zava-misy sy nitondra sahady fanampiana vonjimaika ho azy ireo izay nahitana vary 10 kitapo, siramamy 2 kitapo, menaka 8 baoritra ho an’ireo fianakaviana 81 izany hoe olona 240 traboina.
Maherin’ny roa alina ireo traboina
Araka ny antontan’isa avy tamin’ny BNGRC, dia omaly tamin’ny 2 ora antoandro, tafakatra 20 103 ireo traboina manerana ny Nosy. Olona 2 no namoy ny ainy, olona 2 tsy hita popoka, miisa 15 729 ireo nafindra toerana. Manoloana ny takaitra goavana navelan’ny rivodoza AVA izay, tsy nitazam-potsiny ny minisiteran’ny Mponina, fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy fa nanamafy ny fidinana ifotony nataony tamin’ny fijerena akaiky ireo tena filan’ireo niharam-boina. Ho an’ny teto an-drenivohitra izao, nisy ny ekipa nandehandeha mijirika ireo fokontany, ka mihaona manokana amin’ireo mponina mijery akaiky ny loza vokatry ny AVA. Tsy mandeha manokana anefa fa misy ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Mponina sy ireo ekipan’ny mpamonjy voina, indrindra ny BNGRC ary ny fandraisana fepetra. Ao anatin’ny fandraisana fepetra vonjimaika ny fametrahana toerana miisa 3 nametrahana ireo traboina, toa ny hita eny Tsaramasay, Ankorondrano Andranomahery ary Ankazomanga. Araka ny tarehimarika avy tamin’ny minisiteran’ny Mponina, fianakaviana 61 izay ahitana olona miisa 109 no traboina eny Tsaramasay, ka napetraka ao anaty lay avy amin’ny BNGRC. Tao Andranomahery kosa, dia olona miisa 204 ao anatin’ny fianakaviana 81 no nafindra eny amin’ny biraom-pokontany. Marihina anefa fa tsy teto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ireo faritra rehetra voakasiky ny rivodoza AVA no nitondran’ny ministera fanampiana amin’ny maha ministeran’ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy azy. Nampatsiahy koa ny minisitera fa, manana ivon-toerana roa fandraisana ireo 4’mis, eny Isotry, izay afaka mandray olona hatrany amin’ny 1800 izay misokatra foana, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny rivodoza izao.
Tapaka ny lalana
Ankoatra ireo olona nafoy, fahapotehan’ny tanàna, ary ny faharavan’ny trano maro vokatry ny rivodoza AVA dia isan’ny nitondra takaitra tamin’iny fandalovan’ny AVA iny ihany koa ny lalana, ka tanàna maro no voatery mitoka-monina amin’izao fotoana izao. Isan’ny nisongadina amin’izany ireo lalam-pirenena. Raha miatsinanana iny izao, isan’ny nahitana fahatapahan-dalana ny RN2, ao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Araka ny angom-baovao azo, dia misy fihotsahan’ny tany eo amin’ny lalana RN2 PK 140 ao amin’ny toerana antsoina hoe Anevoka eo anelanelan’Andasibe sy Beforona, distrikan’i Moramanga, ka ny fiara madinika ihany no afaka mandala. Mbola any amin’ny RN2 ihany fa eo amin’ny PK 136, izay lalana mahitsy 1km miala ao Andasibe mankany Toamasina, vokatry ny fiakaran’ny rano dia tsy afaka mandeha eo intsony na ny fiara madinika aza. Any amin’ny RN7 indray, dia voalaza fa lasan’ny rano tanteraka ny tetezana Pont Bailey ao Vohiposa, omaly maraina. Ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany, dia tapaka ihany koa ny RN45 PK 36+100 any Ranomafana Vohiparara, distrikan’Ifanadiana, vokatry ny rotsak’orana mantsy dia nihotsaka ny tany. Araka ny vaovao farany voaray, namoaka arrêté ny lehiben’ny distrika fa tapahina tanteraka aloha ny RN25 ahafahana manamboatra azy. Vaky ihany koa ny tohodrano any Miandrivazo izay miteraka fahatapahan-dalana.
Raha nihidy ho an’i Madagasikara ny fandraisam-pitenenana mandritra ny fivoriamben’ny firenena mikambana, tao anatin’ny dimy taona mahery, noho isika voasazy vokatry ny fanonganam-panjakana tamin’ny andron-dRajoelina, dia misokatra midanadana ho antsika izany amin’izao. Porofon’izany, malalaka ny ...Tohiny
Fambolen-kazo : NAHATANTERAKA NY ADIDINY NY HVM